a mon avis ,un chef religieux ne devraient pas être politisés parce que la politique et la religion sont deux plates-formes différentes,c’est-à-dire qu’il ne faut pas le confondre avec la religion et la politique
Tsy kilalao ny politika amiko, raha ny fahatsapako mantsy dia nentim-pahatairana tao fotsiny ireto olona roa ireto ka resy lahatra fa ho ahavita hitondra sy hitantana an’i mada. Raha i Pasteur Mailhol no ho lany moa tsy hiteraka olana eo amin’ny antokom-pinoana hafa va izany? ary mety hiterak mihintsy aza tsy fifankazahoana.
Inona indray izao ny teny fampiesonana ataon’ity Maihol ity amin’izao fifidianana izao? Olona mba tokony azo hinoan-teny no handrandrain’ny vahoaka hilatsaka fa tsy izay mirediredy rehetra ity. Na ity ramatoa iray ity ary dia efa fata-daza teo @ fitarihina tolona teto. Tsy mendrika azy ireto ny hitondra
Mbola averiko ihany fa tsy hisy fiovana izany eto Madagasikara raha mbola olona tsy manana traikefa ohatran’ry Maihol no hitondra eo!
9 août 2018 à 15 h 01 min
Tsy olana mihintsy na lehilahy na vehivavy no ho mpitondra eo. Ny zava-dehibe dia ny fananan’ilay olona traikefa amin’ny fitantanana ny firenena , hafa ihany ny olona mana-pahaizana , ny fahaizana ihany manko no vady tsy mamitaka!
Aza adino fa maro koa anefa ireo manam-pahaizana kanefa tsy manana fahendrena. Aleoko lavitra hoentin’ny olona hendry toy izay hoetin’ny olona mahay kanefa tsy hendry. Fa izaho mino fa misy olona amin’ireo kandida mbola ho avy no sady hendry no mahay mitantana.
Mahaiza mifidy ry Malagasy! Dieny izao dia diniho tsara ny safidinareo , aza manaiky ho resena lahatra amin’ny kobaka am-bava fa ny nenina tsy aloha fa afara.
Pasteur Mailhol, mihevitra ve ianao fa ahatosika ny fametsifetsena ataon’i Rajoelina? Mihevitra ve ianao fa ahavita hitantana firenena raha toa ka mbola eo ireo mpanohitra maro be tsy voatanisa? Sarotra ho anao ny hiaritra izany.
Fa fanjakana ETY an tany SA any an danitra no tena katsahan ‘ i pasteur ??
Mbola malalaka ny varavarana ho an’ireo rehetra mbola tsy nanatitra ah! vonona foana handray anareo ny HCC, ary hatreto alou mbola tsy afaka miteny nareo oe kandidà fa mbola hisy sivana ireny ah!
Inona ary no tena maharisika anilay olona izay efa fantany fa tsy ho lany izany izy kanefa mbola mirotsaka ihany. Tena fitiava-tanindrazana tokoa ve? Amikou aloha misy zavatra tian’izy ireo ahatongavana ao ambadik’io indrindra fa i Mailhol io.
Averiko hatrany ny fanaterana taratasy aloha tsy midika fahavononana, ary tsy izay mirotsaka manao kandida tsy voatery ho manana traikefa amin’izany. Ny tiako ho ambara antsika rehetra dia hoe ny efa fantatra traikefa no tohanana ary avelao any ireo namono olona teto amin’ny firenena malagasy.
efa vola tsy homby paosy kosa ngamba ny an’ireto kandida roa ireto, izay vahoaka dia mila olona manana foto-kevitra matotra hampandrosoana ny firenena. fa tsy mila olona tia andrakandrana toa an’i Pasteur Mailhol sy ramatoa Fanirisoa ernaivo
Raha ny zavatra hita @zao dia maro ireo kandidà no voakarama fa tsy sitrapony ny hanao izany! Hafa ihany ny olona hendry ary mahay mandinika tsara sy mbola mihevitra mandrakariva ny fampandrosoana ny malagasy vao manapa-kevitra.